Academic life is no - Inglês - Birmanês Traduçãoeexemplos
Você procurou por: academic life is no exception ! (Inglês - Birmanês)
There is no inserted disc to copy.
There is no disc in "%s".
There is no selected disc image.
ငါ့အသက်သည် လေသက်သက်ဖြစ်ကြောင်းကို အောက်မေ့တော်မူပါ။ နောက်တဖန်ကောင်းသော အကျိုးကို ငါမမြင်ရ။
There is no place for them in our society.
အဲ​လို​ဟာ​တွေ​အတွက် ငါ​တို့ အသိုင်းအဝိုင်း​မှာ နေရာ​မ​ရှိ​ဘူး။
ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ရသော အကြောင်း သည် သူတို့မျက်စိ၌ မထင်ဟုကျမ်းစာလာသတည်း။
ဘုရားသခင်သည် အဘယ်သူ၏မျက်နှာကို မျှမှတ်တော်မမူ။
ဗိုင်းရပ်စ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကိုယ်ခံအားရှိသည်ဟု အတည်ပြုနိုင်သည့် စမ်းသပ်ချက် မရှိသေးပါ။
The weak defense system of the Philippines is no secret.
ကြံ့ခိုင်​တဲ့ သယ်ယူ​ပို့ဆောင်​ရေး ရဟတ်​ယာဉ် လေး​စီး၊
There is no image data in the clipboard to paste.
Clipboard ထဲမှ ပွားယူဖို့ ရုပ်ပုံ အချက်အလက်ကြမ်း မရှိဘူး။
There is no active layer or channel to cut from.
ဖြတ်ယူဖို့ သက်ကြွတဲ့ အလွှာ (သို့) ချာနယ် မရှိဘူး။
There is no active layer or channel to copy from.
မိတ္တူကူးဖို့ သက်ကြွတဲ့ အလွှာ (သို့) ချာနယ် မရှိဘူး။
ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်း၌ သေဘေးမရှိ၊ အသက်ချမ်းသာလမ်း ဖြစ်၏။
ကာကွယ်ဆေး သို့မဟုတ် တိကျသော ဗိုင်းရပ်စ်သုတ်သင်နိုင်သည့် ကုသနည်းကို မသိရှိရသေးပါ။
မှတ်သားမှု သက်ကြွတဲ့ အလွှာ (သို့) ချာနယ် မရှိဘူး။
အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် သေသောသူ ဖြစ်၍ သင်တို့အသက်သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုရား သခင်၌ ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။
umziehen (Alemão>Russo)ang mga tao ay naka base na sa society (Tagalo>Inglês)priskila (Suaíli>Maori)rfi (Polonês>Inglês)escaigui (Catalão>Espanhol)organic fertilizer (Inglês>Tagalo)open hearted (Inglês>Tagalo)réfractomètres (Francês>Polonês)hérault (Polonês>Romeno)mucor (Alemão>Francês)mi milo (Polonês>Inglês)bacon (Tagalo>Inglês)permanent closing (Inglês>Árabe)que tinguis un bon dia (Catalão>Inglês)i mean this (Inglês>Indonésio)pang aasar (Tagalo>Inglês)hoochie (Inglês>Espanhol)nice to see you again (Inglês>Sinhala)coconut tree composition in tamil (Inglês>Tamil)mere to l lag gai (Inglês>Hindi)negotiable (Inglês>Polonês)disertares (Espanhol>Chinês (simplificado))输入argus数据库的不良事件总数 (Chinês (simplificado)>Inglês)les services de rÃ©ception (Francês>Inglês)samdi (Islandês>Árabe)